Wararka Maanta: Isniin, Sept 23, 2013-Bam Gacmeed lagu Weeraray guri uu daganaa taliyaha Saldhigga dhexe ee Magaalada Kismaayo ee Xarunta Jubbada Hoose
Weerarkan ayaa lagu qaadayguri uu daganaa taliyaha oo ku yaal xaafadda Farjanno, waxaana weerarka ka dib la maqlayay rasaas xooggan oo ay ridayeen ciidamadii ilaalada u ahaa taliyaha.
Taliyaha oo u waramay HOL ayaa sheegay in uu ka badbaaday weerarkii xalay, wuxuuna xusay in aysan jirin cid wax ku noqotay weerarkaasi.
“Xalay ayaa la igu soo weeraray gurigeeyga, bambaanooyin ayaa la igu soo tuuray, Ilaah cidna wax kuma yeelin, darbiga guriga ayay burburisay,” ayuu taliyuhu hadalkiisii raaciyay.
Taliyaha ayaa weerarkan ku eedeeyay xoogagga Al-shabaab, walow Xarakada Al-shabaab aysan ilaa imika sheegan masuuliyadda weerarkaasi.
Waa markii ugu horeeysay oo weerar lagu qaado guri uu daganyahay taliyaha saldhigga dhexe ee degmada Kismaayo tan iyo intii loo magacaabay xilkaaasi.
9/23/2013 1:55 PM EST
Saacado kadib markii ay gudiga sare ee amniga qaranka ee Kenya ay shaaciyeen inay la wareegeen xarunta ganacsiga ee Westgate ayaa muuqaallada halkaasi ka imaanaya ay muujinayaan in dagaalkii uusan wali dhammaanin.